MFM : MANKALAZA NY FAHA 40 TAONANY – MyDago.com aime Madagascar
MFM : MANKALAZA NY FAHA 40 TAONANY
Feno 40 taona amin’ity taona 2012 ity ny antoko Mpitolona ho amin’ny Fandrosoan’i Madagasikara na MFM. Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny ny maraina teo tetsy amin’ny fiangonanana Chapelle Militaire Ampahibe ny fotoam-pivavahana ho fanombohana izany tsingerin-taona izany. Ny mpitandrina Ranaivoniarivo Tiana Alisoa no nitory ny tenin’Andriamanitra tamin’izany, izay nalaina tao amin’ny Isaia 62:6-12. Ny filoha nasionalin’ny antoko Manandafy Rakotonirina dia nanambara fa tamin’ny taona 91 dia nijoro ny FFKM nanao ny fanelanelanana teto amin’ny firenena, ary niaraka taminy foana ny MFM. Ankehitriny hoy izy dia mbola eo foana izy ireo ary izahay dia tsymisaraka amin’izy ireo amin’ny fitadiavana vahaolana. Nisaotra ireo rehetra nandray anjara tamin’ny fanatontosana ny fankalazana ny faha 40 taona ny tenany. Rahampitso dia mbola mitohy amin’ny alalan’ny fampirantiana sy ady hevitra etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny hetsika, ka asongadina ao ny lalana nodiavin’ny antoko nandritra ny 40 taona nijoroany. Marihina fa ankoatra ireo olomaventy avy amin’ny antoko, dia tonga nanatrika ny fotoam-pivavahana teny an-toerana ireo ministra avy amin’ny ankolafy Ravalomanana, izay nahitana an-dRamatoa Ihanta Randriamandrato, Ruffine Tsiranana, ary Andriamatoa Ravatomanga Roland. Ireo parlemantera sasantsasany, izay nahitana ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra. Teo ihany koa Fetison Rakoto andrianirina.
Auteur Solo Razafy*Publié le 3 août 2012 3 août 2012 Catégories Politique
8 réflexions sur « MFM : MANKALAZA NY FAHA 40 TAONANY »
3 août 2012 à 22 h 13 min
Miarahaba ny MFM amin’ny faha40taonany ary mirary soa sy fahombiazana ho amin’ny tolona ataony hampanjakana ny demokrasia izay tena ny tenierana tokoa no isian’ny fitoniana, iarovana ny zo maha-olona sy ny fahalalahana ary ny fanjakana iaraha-manana.
Hita tokoa fa maharaka ny vanim-potoana ny politika ara-toetrandro ianareo ary matanjaka rahany foto-kevitra ijoroana ho amin’ny demokrasia izany.
Mailo anefa fa sao tsy mba ahazo ny fahefana ho fanantanterahana ny fenitra soa izany
Mpankasitraka ny manoratra fa tsy mpikambana akory
4 août 2012 à 7 h 57 min
Fa hono hoa: fa angaha mbola misy zany MFM zany?
Miarahaba ary mirary soa feno hoan’ny MFM. « Miorena tsara, aza miova ». Asa raha tsy teo ianareo t@ izao tolona izao mba ahoana no niafaran’ny firenena. Vohizo hatrany ny fampianarana ny olona (mba tsy holasa tahakan-dry denise itony)indrindra ny hevitry ny hoe fitondrana tarihin’ny olom-boafidy sy ny fanajan’ny rehetra hoe fe-potona itondrana na any an-tsekoly io na any an-tsena indrindra moa fa ny firenena. Ary aza sorena ianareo raha ilazako fa ny tena fositra mampivaralila ny firenena sy ny vahoaka dia ireto : ny mpanao politika, ny avara-pianarana, ny foloalindahy. Ary ny tena mahagaga fa mba misy misaina ihany angamba izy ireo kanefa mipetra-potsiny mody gisa teo anatrehan’ny antso nataonareo nandritra izay 4 taona niainan’ny firenena tao anatin’ny aizina izay.
Misaotra anareo MFM, amin’ny fijoroanareo amin’ny fitandroana ny tombon-tsoa ambonin’ny firenena hatrany. Misaotra anareo tsy nitsahatra nilaza ny marina.Misaotra anareo nampiseho fa hay misy antoko afaka mitana ny maha izy azy eto Madagasikara.
Miangavy anareo mba havereno ny 72 fa ianareo no mahavita azy. Tena potehin’ireto « tg Vendrana » ireto ny firenena malagasy.
faly miarahaba de mirary soa hatrany ho anareo MFM. antoko mbola azo lazaina fa mitana ny maha izy azy hatrany
Nisy fiantsoana nataon’ny mpiaro ny ara-dalàna, mba hanampiana an’ireo mpiray tanindrazana !
Anisan’izany fanampiana izany, ny fizàram-bary natao tao amin’ny Magro androany !
Mba aiza ny sary ry MyDago ho hitan’ny olona rehetra, fa tsy mpisoloky toy ny sasany ny mpiarao ny ara-dalàna !
Tsy tao angaha ianareo androany ?
Misaotra an’ireo mpikarakara rehetra, na ny avy any ivelany na ireo ao an-toerana !
Hoy ry zalahy taloha : Tsy maintsy mandresy ny tolona ! Ampiako hoe : Tsy maintsy mandresy ny marina !
4 août 2012 à 22 h 02 min
Aoka tsy ho variana isika ô: »Publicité électorale imosée à la presse privée »!!!!!
Io indray mbola « dictature » ampiarin’i domelina avy a@ sefony frantsay.
Dia aiza ihany hono ity tolona e?
Taraiky be ianao ry Denise, fa mbola misy ny MFM, ary i Manandafy irery sisa no mpikambana ao, satria ny mpitolona tao dia nanohana foto-kevitra fa tsy misolelaka olon-tokana toy I manadafy.
MFM= Miantoka ny Fahanteran’i Manandafy, entohan’n de8 mandrapahafatiny hono ny retiretiny.
Précédent Article précédent : KENDA NY VOMANGA NASESIKY NY TANANY NY AV7
Suivant Article suivant : TSY MIALA AMIN’NY TONDROZOTRA ISIKA